Daydream no sehatra VR an'ny Google natsangana tao amin'ny Android N | Androidsis
Amin'ity fironana ity izay manamarika ny zava-misy virtoaly erak'izao tontolo izao, Tsy diso anjara tamin'ny lamasinina i Google Ary nalainy tamin'ny sehatra iray izay hitondra traikefa lehibe amin'ny volavola fanovozan-kevitra sasany, indrindra ny an'ny fanaraha-maso lavitra, izay hahafahantsika ho somary amin'ny haavon'ny zavatra hita amin'ny HTC Vive, fitaovana tsara indrindra an'ny ny fotoana ho an'ny VR.
Daydream no anaran'ilay sehatra rindrambaiko zava-misy virtoaly, ary misy fika ho an'ny telefaona manohana VR, famolavolana referansy ary fivarotana sy interface misy nohavaozina hanomezana traikefa tanteraka amin'ity tontolo vaovao misokatra amintsika ity amin'ity taona ity
Ny telefaona rehetra voamarina ho Daydream dia mila manana toetra tsara toy ny a tsara processeur, mampiseho latency ambany sy ny sensor orientation. Efa manana anaran'ny mpanamboatra sasantsasany izay hanatevin-daharana an'ity sehatra ity izahay ary ao no ahitantsika ny Samsung, HTC, LG ary ZTE.
Ny Play Store, sy ny fampiharana maro hafa toa ny Google Photos, YouTube ary ny Maps, dia havaozina ho an'ny fotoana ary amin'izany dia afaka manana traikefa feno avy amin'ireo serivisy ireo ny mpampiasa. Ary na i Google aza dia namela ny tenany hanolotra ny firaketana referansa ho an'ny solomaso sy ny fanaraha-maso lavitra. Eny, hanana baiko izay maka tahaka ny zavatra niainan'ny HTC Vive izahay ary izay nasehon'ny Mountain View tamin'ny horonan-tsary.
Hampifandray ny solomaso amin'ny telefaona Android N anao ianao ary ity andinin-tsoratra masina amin'ny famolavolana ity dia zaraina amin'ireo mpanamboatra izay hiandraikitra ny famoronana ireo fitaovana ireo. Io dia hahafahantsika eo alohan'ny volavolan-drafitra marobe, koa misy faravodilanitra iray hafa misokatra indray amin'ity lafiny ity mba hihaino tsara izay hitranga. Google koa dia naniry ny hilaza fa ho mpahazo aina izy ireo ary tsy hanelingelina ny fiainana zava-misy virtoaly.
Votoatin'ny VR hiankina amin'ny sensor amin'ny telefaona io izay hanoratra ny fihetsiky ny loha rehetra miampy ny fampidirana ny fifehezana amin'ny bokotra roa. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry ny fahatongavan'ny fitaovana sy telefaona manohana ny zava-misy virtoaly Google isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia manambara ny Daydream, sehatra virtoaly virtoaly izay lasa ampahany amin'ny Android N
Google Home no mpanampy manokana tonga lafatra ho an'ny tranonao